घचेटाइ – Purna Oli
August 24, 2015 Purna Oli	0 Comments
गोजीमा बस चढ्न पुग्ने पैंसा समेत बाँकि थिएन, मसंग । आजै गीत रेकर्डिङको लागि पेश्की दिने वचन दिइसकेकोले बैंकबाट पैंसा झिक्ने उद्देश्यले म लागेँ असनको गल्ली हुँदै न्यूरोडतिर । असनमा संधै मानव भेल बगिरहन्छ । त्यहाँबाट अघि बढ्न घचेटाघचेट र ठेलमठेल गर्नैपर्छ हरेक बटुवाले । जो घचेट्दै अघि बढ्नसक्छ, उही नै छिटो गन्तव्यमा पुग्दछ यहाँ । त्यही घचेटाइमा म पनि सहभागी हुँदै म चारबजेतिर न्यूरोडस्थित एक बैंकमा पुगेँ । तर दुर्भाग्यवश् बैंक चार बजे बन्द भैसकेको रहेछ । अब रात्रीकालीन सेवाको लागि पाँचबजे मात्र खुल्दो रहेछ । अतः मैले पाँचबजेसम्म पर्खनैपर्नेभयो । यताउता लाग्दा फेरि न्यूरोडको मानवभेलसंग घचेटाघचेट गर्नुपर्दथ्यो, ममा त्यति सामर्थ्य पनि बाँकि थिएन किनकि हिजो रातरातभर भोकल रेकर्डिङमा ननिदाई बिताएको थिएँ । अतः बैंककै गेटमा अडेस लागेर म एक्लै उभिएँ । एकैछिनपछि अरु मान्छेहरु पनि मेरो अगलबगलमा उभिन थाले । मलाई अलि सहज भयो प्रतिक्षा गर्न । केही समयपछि बैंकको गार्ड गेटमा देखिए, उनले पालोको कुपन बाँड्न थाले । सानो संख्याको समूह भए पनि अरुलाई घचेट्न सक्नेले पहिलो पालोको कुपन भेट्टायो । मेरो पाँचौँतिर पालो पर्यो । मभन्दा पछि तीनचारजना व्यक्तिहरुले पालोको कुपन लिए । बिस्तारै एकएक गरी मान्छे थपिन थाले र एकएक गरी कुपन पनि बाँडिदै गयो । पछि आउनेलाई भने कुपन लिन तँछाडमछाड गर्नुपरेन ।
पाँच बज्दानबज्दै बैंकिङ कार्यको लागि आउने मानिसको संख्या झण्डै पच्चीसको हाराहारीमा पुगिसकेको थियो । गेट पारदर्शी भएकोले भित्र झण्डै पैँतीसचालीस जना अटाउने आरामी कुर्सीहरु लहरै मिलाएर राखिएको बाहिरैबाट देखिन्थे । जब पाँच बज्यो, त्यहाँ प्रतिक्षारत मान्छेहरु भित्र पस्नको लागि पुनः घचेटाघचेट शुरु भयो । प्रत्येकले पालोको कुपन पाएकै छन्, भित्र पाँचवटाभन्दा बढी काउण्टरको व्यवस्था गरिएकै छ, एकछिन पालो कुर्न आरामी कुर्सी र ४२ इन्ची एलइडि टेलिभिजनको व्यवस्था पनि छ, चिया र चक्लेट पनि आफू खुशी लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ भित्र । तर मानिसहरुमा पटक्कै एकछिन पनि धैर्यधारण गर्न पनि सक्दैनन् । फलतः गेटको भीमकाय पारदर्शी ढोका समेत फुटाउलान् सरी गरी लाजमर्दो र हाँसउठ्दो व्यवहार प्रदर्शन गर्दै एकले अर्कोलाई घचेट्दै हुरुरु एकसाथ भित्र छिर्छन् मान्छेहरु । म पनि त्यही हुलमा भित्र पस्छु र एउटा आरामी कुर्सीमा विश्राम गर्छु । विश्राम गरेको दुई मिनेट नबित्दै मेरो पालोको नम्बर-बत्ती बल्छ । पाँच मिनेटभित्रै मेरो काम सम्पन्न हुन्छ । म लाग्छु आफ्नो गन्तव्यतिर ।
जे होस् बैकिङ सेवामा अन्यको तुलनामा सेवाग्राहीलाई सक्दो बढी सेवा दिने आधुनिक प्रविधि अपनाइएको छ । तर अन्य क्षेत्र भने भद्रगोल छ । रेकर्डिङमा पनि त्यस्तै भद्रगोलको अवस्था छ । जसले भनसुन गर्यो । जो दिनरात धाइराख्यो उसैले पालो पाउँछ । मैले झण्डै चार रात खडा बसी बिताए पनि मेरो काम सम्पन्न हुन सकेको छैन । स्टुडियोका प्राविधिक सन्तोष र पवनले भने मेरो कामको लागि बिरामी स्वास्नीको परवाह नगरेर रातरातभर मलाई सहयोग गरिरहेका छन् । सोचेको भन्दा रेकर्डिङ गराउनेहरुलाई धेरै धपेडी हुँदोरहेछ । रेकर्डिङका प्राविधिकहरु पनि रात वा दिन नभनी अहोरात्र खटेर काम गरिरहने । परिश्रमको साथै नाम र दाम कमाइरहेका छन् कलाकारहरुले ।
म भने कुनै कलाकार होइन । फेसबुके साहित्यकार बनी टोपलेको अवस्थामा विभिन्न समयमा फेसबुकवालमा पोष्ट गरिएका गीतहरु टुक्राटुक्री जोड्दाजोड्दै एउटा गीती नाटक तयार भएको छ मेरो । यसलाई राम्रो ध्वनी दिन पाए हुन्थ्यो भनी मनभित्र हुटहुटी चलेको धेरै भैसकेको छ । जिल्लामा केही स्थानीय कलाकारहरुबाट मोबाइलमा ध्वनी रेकर्डिङ गराए पनि त्यसले चित्त बुझेको हुँदैन । समयको अन्तरालमा मेरो काठमाण्डौ पुग्ने काम पर्छ र काठमाण्डौ पुगेपछि जिल्लाका चर्चित कलाकार जय देवकोटालाई खोज्ने प्रयत्न गर्छु । केही समयको प्रयासपछि जयजीसंग भेट पनि हुन्छ । चिनजान गर्दै जाँदा उहाँ नजिकका नातेदार भएको कुरा पत्ता लाग्दछ ।
जयजीसंगको भेटमा मैले नाटकको कपी नबोकेकोले उहाँले घरमै आएर हेर्ने ईच्छा व्यक्त गर्नुहुन्छ र हामी दुवैजना मेरो घरमा आउँछौँ । मैले गीती नाटक लगायत मेरा अन्य रचनाहरु पनि देखाउँछु उहाँलाई । उहाँले ती रचनाबाट राम्राराम्रा गीतहरु बन्न सक्ने कुरा बताउनुहुन्छ । स्टुडियोको चारपाँच हजार खर्च बाहेक अन्य खर्च चिनजानको आधारमा आफैले व्यवस्थापन गर्ने र धेरै खर्च नलाग्ने आश्वासनले म निकै उत्साहित हुन्छु । उहाँले मेरो ठाडी भाकाको एउटा गीत समेत बोकेर फर्कनुहुन्छ । राति गीती नाटक र ठाडी भाकाको गीत भाका हालेर सुनाउँदा म दङदास हुन्छु र शुरु हुन्छ मेरो गीत रेकर्डिङको दौडधुप । मेरो दिनभर र रातभरको दौडधुपको तमाशा पनि हिजोआज साँच्चिकै हेर्नलायकको छ ।
यस्तै कुरा कल्पिँदै म पुरानो बसपार्कसम्म पुग्दछु । पुरानो बसपार्कको दुवाकोटको लागि छुट्ने गाडी खचाखच छ यात्रुहरुले । तर पनि बस छुटेको छैन । दुवाकोटकै अर्को गाडी नआएसम्म यो गाडी अगाडि बढ्दैन । मान्छेहरु घचेटाघचेट गर्दै भित्र छिरिरहेका छन् । सिट रोक्न झ्यालबाटै झोला पुर्याउनेको रमिता पनि हेर्न लायक छ । गाडीभित्र “यो मेरो सिट” भन्दै झगडा गर्नेको संख्या पनि ठूलै छ । खलासी पनि सकभर धेरै संख्यामा यात्रु कोच्न चाहन्छ र सबैलाई पछिल्तिर घचेटिरहेको छ । कसलाई कहाँसम्म घचेट्ने उसकै अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । सिटको माथि “महिला सिट” र “अपाङ्ग सिट” लेखिएको पनि छ । तर त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । त्यस सिटमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि खलासीलाई नै छ । बुढाबुढी वा बच्चा बोकेका आइमाइ गाडी चढे भने र खलासीको मन पग्लियो भने उसले सिट मिलाईदिन सक्छ ।
चालकलाई भने अरु कुराको केही परवाह छैन । यात्रु चढे पनि नचढे पनि अर्को समान गन्तव्यको बसलाई पर्खेर गाडी ठाउँठाउँ रोकेर राख्नु र भाडाको सम्बन्धमा यात्रुको खलासीसंग खटपट परेमा खलासीको पक्षमा बोलिदिनु उसको निर्णय अधिकारका कुराहरु हुन् । कतैकतै खलासीको “जाउँ ! जाउँ !! गुरुजी, अर्को गाडी आइसक्यो” भनी पेश गरेको टिप्पणीलाई भने मन नलगाई नलगाई सदर गर्छ चालकले ।
बस गन्तव्यमा नपुगेसम्म वा आफू गन्तव्यमा नपुगेसम्म एक यात्रुसंग अर्को यात्रुको र पटकपटक खलासीको घचेटाघचेट चलिनै रहन्छ । सिटमा बस्न पाउने भाग्यमानीहरुले भने यो घचेटाइ खेप्नुपर्दैन । बसमा चढ्यो कि सिटमा लमतन्न परेर घुर्न थालिहाल्छन् यिनीहरु । उभिएर घचेटाइमा परिरहेका यात्रुहरुको हात वा खुट्टा आफ्नो जीउमा लाग्यो भने रिसले आगो हुँदै कराउँछन् “के हो ? आँखा छैनन् ? यता हात लाग्यो, अलि उता लैजाऊ तिम्रा हात । अलि उता सर भनेको सुनेनौ ? अर्कैको जीउमा टाँस्सिनु पर्छ ?”
म धेरै पटक यो बसमा चढेको छु । तर आज म चढ्नुपर्ने छैन यो बसमा । ‘म चढ्नुपर्ने छैन’ भन्ने कुरालाई आत्मबोध गर्दा पनि औधी आनन्दको अनुभूति हुन्छ मलाई । किनकि यो घचेटाइको सट्टा मनमा अर्कै घचेटाइले दिनरात कुदाकुद गराएको छ मलाई, हिजोआज । म गाडी बाहिरबाटै याने सडकबाटै यो रमिता चाख मानेर हेरिरहन्छु धेरै बेरसम्म ।
यस्तो घचेटाइ हरेक ठाउँमा छ । कहाँ छैन ? यही घचेटाइले विद्वान बन्नुपर्ने मान्छे पटमुर्ख सावित भएको छ । पटमुर्खहरु विद्वान कहलाएका छन् । यस्तो घचेटाइको सामना गर्नु नपरेको भए म पनि बुद्ध वा महात्मागान्धी वा अब्राह्म लिंकनको दर्जासम्म पुग्थेँ हुँला ! तर खोइ ? एउटा टिठ लाग्दो निम्नस्तरीय कर्मचारीको दर्जभन्दा यताउता चलमल गर्न सकिएको छैन । यो घचेटाइको क्षतिपूर्ति मिल्ने भए सबभन्दा बढी क्षतिपूर्ति पाउनेमा म नै पो पर्थेँ कि ?
निजामती सेवामा त यो घचेटाइ सर्वथा नाङ्गो र बलमिच्याँइको छ । यताका खलासी र चालकहरुको विवेक एक सार्वजनिक यातायातका खलासी र चालकको जति पनि छैन । यिनीहरु बुढाबुढी र बच्चा बोकेका आइमाइलाई सिट मिलाईदिने सम्मको क्षमता पनि राख्दैनन् । अर्कोलाई घचेटेर को कहाँ पुग्ने हो ? र के प्राप्त गर्न खोजेको हो ? घामजस्तै छर्लङ्ग छ निजामती सेवामा । तर पनि कहिल्यै यो घचेटाइ रोकिएन । चालकलाई मतलबै छैन, ठाउँकुठाउँमा गाडी तेर्स्यायो वश् । खलासीहरु मान्छे चढाउनै र यात्रुलाई घचेटघाचेट पारी मनपरी भाडा असूल गर्नमै रमाइरहेका छन् । घचेटेर अघि पुग्नेले कसरी अघि पुगेको हो न्यायालयको कुनै कठघरामा कतै प्रमाण पेश गर्नुपर्ने छैन । घचेटी माग्नेले त्यसको क्षतिपूर्ति कहिल्यै पाउने होइन । चित्त बुझायो वश् । थुक्क जागिरी !!!
यही आत्मग्लानीले मलाई पोलिरहेको छ र मलाई उल्टो दिशातिर घचेट्दै छ यही पीडाबोधले । मलाई थाहा छ, म बाँचुन्जेलसम्म कैयौँ यस्ता घचेटाइको सामना गर्नुपरिरहनेछ, जता पुगे पनि । तै पनि भित्रभित्रै ‘अर्कै बाटो समात्न पाए हुन्थ्यो’ भन्ने हुटहुटीले सुत्नखान दिएको छैन । यो लक्षणको पूर्वाभाषले गर्दा पारिवारिक सम्बन्ध चीसिँदै जान थालेको छ । कसैको परिवारलाई पनि आफ्नो परिवारको एक सदस्य दिनरात बाहिर बास हुन थालेपछि मन पर्ने कुरा पनि भएन । तर यो कुरालाई समेत परवाह नगरी म विपरीत दिशातिर घचेटिँदैछु कि जस्तो लागिरहेको छ । अरुको कारणले होइन, आफ्नै मनले ।
दुवाकोटे गाडीले आफ्नो गन्तव्यतिर गति लिइसकेपछि म विस्तारै घचेटिँदै जान्छु अनामनगरतिर । मलाई यो गाडी चढ्नु नपरेकोले आज हाइसञ्चो लागेको छ । अनि खुशी हुँदै पस्छु रेकर्डिङ स्टुडियोमा । त्यहाँ जयजी पहिल्यैदेखि पालो नपाएर भुइँमै अफमुडमा लेटिरहनुभएको रहेछ । म झसङ्ग तर्सन्छु । सिटमा अरु नै मान्छेहरुको घुइँचो लागेको छ ।
मलाई देख्नेबित्तिकै चिन्तित स्वरमा बोल्नुहुन्छ जयजी, “फ्वाजू, तपाईँलाई औधी दुख्ख भयो हगी ? खोइ, आज पनि काम नसकिएला जस्तो छ । अरुको आजै सक्नुपर्ने काम छ रे । आज पनि रातभर हामी यतै बस्नुपर्नेछ । चाउचाउ र पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ला ।” जयजीको परिस्थिति म पनि बुझ्छु । मलाई चीनजान भएदेखि नै मनवचनले पूर्ण रुपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ उहाँले । अत्यन्तै व्यावहारिक र मिलनसार मान्छे ।
लाग्छ, बिचरा जयजी, यहाँ पनि अर्को घचेटाइमा परेछन् । साथसाथै त्यही घानमा म पनि । मैले अस्तिको रात यही भवनको चीसो सिँढीमा नै उँधमण्टो लगाएर रात बिताएको झलझली सम्झेँ ।
← देब्रे गोलीगाँठोको चोट
गर्भदानकर्ताहरुलाई रक्तमुच्छेल गर्भेणाको पीडामिश्रित साधुवाद् →
यस वेवसाइटका विषयवस्तु Select Category अडियो (9) अनुत्तरित् प्रश्न (? ? ?) (1) अनुवाद (1) द जङ्गल बुक (1) उखानटुक्काहरु (10) उपन्यास (10) कथा (31) लघु कथा (5) कविता (83) गद्य कविता (34) छन्द कविता (17) पद्य कविता (15) मुक्तक/गजल (11) गीत (20) शब्द (17) गीता शब्दकोष (1) गीती नाटक (2) चिठीपत्र (3) तस्बिर आफै बोल्छ (3) दैनिक संक्षिप्त समाचार (1) धर्म (2) नीति तथा कानून (15) प्रवचन संग्रह (31) फर्म्याटहरु (1) भिडिअो (4) मननीय भनाइ (42) मनोरञ्जन (77) मुरली (1) मेरो बारेमा (4) सम्पर्क (1) लेख/आलेख (19) लेखा सम्वद्ध कानूनहरु (20) विद्यमान कानुनका प्रावधानहरु (6) विविध (9) शब्दकोष (11) श्रीमद्‍भागवतगीता सार (18) संक्षिप्त रुप (10) संक्षिप्त रूप (3) संक्षिप्त रुप (1) समीक्षा (3) संस्मरण (34) रुकुम साहित्यिक नियात्रा-०७५ (8) स्वविकसित सफ्टवेयरहरु (15) स्वागतम् (1)
Archives Select Month January 2020 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 January 2019 December 2018 October 2018 September 2018 July 2018 March 2018 December 2017 November 2017 October 2017 August 2017 July 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015 August 2015
Copyright © 2020 Purna Oli. All rights reserved.